जलवायु परिवर्तनः संविधान सभा सभासद घरदैलो कार्यक्रम « Climate Change and Nepal
« CA appeal for an urgent issue: Climate Change & Wildfires
Message from Minister »
Posted by NYCA Blogger on March 29, 2009
Dr. Ram Saran Mahat, Former Finance Minister in discussion at Mahat Residence
साथमा ल्याप्टप प्रस्तुतीकरणको लागि केहि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि जानकारी भएका पर्चाहरु अनि युवा सम्मेलनले तयार पारेको ूजलवायु परिवर्तनः युवा घोषण पत्रू र हामीले अत्यन्तै मिहेनत गरेर तयार पारेको सविधान निर्माणका लागि सहयोगी हुने वातावरण सम्बधी केही वुदाहरुको थैलो लिएर हामी सभासदहरुको घर घरमा पुग्छौं । सभासदहरु सँग हाम्रो एउटै विमति रहन्छ राजनीति परिवर्तनशील अनि अग्रगामी हुछ तर वातावरण पर्यावरण भने यथास्थिती वादमा विस्वास गर्छ । वातावरणलाई अग्रगामी बनायौ भने बिनास तर्पु अघि बढ्छ ।
हुन त भेटघाटको दैराहनमा हाम्रा सभासदहरु बिग्रदो वातावरण प्रति निकै नै सचेत भएका पायौं । अमेरिकाले त्यो कुन सन्धिमा हस्ताक्षण नगरेकोले नै यस्तो भएको हो भन्ने कुरा देखि काठ्माडौंको फोहोर र वायु प्रदुषणका बारेमा हाकी हाकी गफ गर्छन हाम्रा सभासदहरु । कोही यही प्रदुषण गरको धुवा धुलोलाई कार्वनको व्यापार बेचेर मनग्य धनराशी भित्रयाउन सकिन्छ भन्दा छक्क पर्छन त कोही यो सबै पुजीपतिहरुले गरीबहरुलाई थुपारेको समस्या हो र यसको कुनै औचित्य छैन भन्छन् । हेर्नुस न यी विविधता यी सविधान निर्माताहरुलाई एकै स्थानमा राखेर यस्ता बिषयहरुमा छलफल गर्नु कत्तिको न्याय संवत होला त त्यसैले पनि हामीले सभासदहरुको घर घरमा नै गएर व्यक्तिगत रुपमा नै छलफल गर्ने योजना बनाएका हौं ।
आज यो सुरुवातको घडीमा हामी अत्यन्तै हर्षित छौं । रात बिहान या बेलुका नभनी हाम्रा साथीहरुले देखाएको जागरुकता साथै अधिकांश सभासदहरुले हामीसगँ गरेको वाचा अनि त्यो न्यानो माया हामी कहिल्यै बिसने छैनौ । एक बेलुकीे लगभग आँठ बजे एमालेकी सभासद पद्यमकुमारी ववव घरमा उहाँ एक्लै हुनुहुदो रहेछ । दिन भरिको थकाई एकछिन आराम लिने के सोचमा हुनुहुन्थ्यो हामी टुप्लुक्क पुग्यौ । सुरुमा उहाँ झर्कनु भयो पछि कारण थाहा पायौं
Chariman of Natural resources ... Committee, Amrita Thapa Magar
हामी बाहेक आज सम्म कोही पनि यस्तो जनचासोको विषय लिएर त्यहा गएको रहेनछ । सबै जागिर चन्दा सरुवा आदीका लागि मात्र जाने रहेछन् । ूहेर्नुस न भाई हामी कसैलाई जागिर खुवाउन अनि पैसा बाढ्न त आएका हैनौ निू सभासद पद्यमकुमारी अर्यालले दुखेसो पोखिन् । यो समस्या त्यहाँ मात्र सिमीत रहेन । लगभग सवै सभासदहरुको यस्तै रहेछ हविगत । पछि सभासद पद्यमकुमारी अर्यालले घरमा कोही छैन पर्खनुस् तपाईहरुलाई म आफै तातो चियो बनाएर खुवाउछु भनेर भान्सा तिर लाग्नु भयो ।
आजको मिति सम्म आईपुग्दा हामी १४ जना विभिन्न राजनैतिक दलका सभासदहरुको घर÷डेरा पुगि सक्यौं । धेरै जसोकोमा बिहानको समय उपयुक्त देखिएको छ । श्री ईको भिजनरीले सहयोग गरेको बिधुत्ीय गाडी पनि हिजो आजको कठोर लोडसेडिङ्गले बन्द भएको छ । साथमा लगेको तुल ब्यानरमा सबै सभासदहरुले हस्ताक्षर गरी सहमती जनाई नै रहनु भएको छ ।
हामीहरुले यही भेटमा सभासदहरुलाई जलवायु परिवर्तनका विविद विषयहरुलाई सम्बोधन हुने किसीमको खाका कोरीनु पर् यो हैं हाम्रो अवको संमिधानमा भनेर पनि प्रस्तुत गर्दछौं । धेरै जसोले ूहो ! यो त हुनै पर्दछ । वातावरण हाम्रो आधारभुत आवश्यक्ता हो यसको राम्रो सम्बोधन हुनुपर्छू भन्नुहँुदा साह्रै खुसी हुने गरेका छौं । अझ वहाँहरुले जलवायु परिवर्तनमा थप रुचि देखाउनु हुदा त हामीले गरेको काम सराहिएको जस्तो लाग्छ । कांग्रेसका युवा सभासद गगन थापाको उत्साह र सहयोग गर्ने वाचा कांग्रेस कै अर्का सभासद डा। रामसरण महत र एमालेका बिजय पौडेलको विषयगत ज्ञान अत्यन्तै सराहनीय थियो । अर्थ बिज्ञ डा। महतले केहि वातावरणवादीहरुको व्यवहार प्रति गर्नु भएको गुनसो पनि सायद जायज नै थियो होला । मधिसे जनअधिकार फोरमका सभासद शिव नारयण उराउले कोटेश्वरको त्यो छेउमा बिधुत्यि गाडीमा सफर गर्दै अत्यन्तै चासोका साथ गरेको छलफल अनि मोओवादीका सभासद झक्कु सुवेदी र देवि खड्कालाई छुन नसकेको वातावरणको चाख सवै एकनासका कहाँ थिए र ! संविधान सभा प्राकृतिक स्रोत आर्थित अधिकार तथा राजस्व बाडफाड समितीका सभापती तथा माओवादीकी सभासद अमि्रता थापामगर र वहाँ कै घरमा रहनु हुने अर्का सभासद गोमा पाठकले देखाउनु भएका चासो भने उत्साहजनक नै थियो ।
CA member Dr. Tilak Rawal, Former Governer, Nepal Rastrya Bank
संविधानमा खाका कोर्नलाई अझ सहज गर्न हामीले प्राथामिक्ता क्रमअनुसार विभिन्न मुद्धाहरु पहिल्यायौं । जस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा वाँच्ने हक हुनेछ । राज्यले प्राकृतिक स्रोत सम्पदा तथा वातावरणको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नेछ । राज्यले वातावरण ह्ाु हुने कुनै कार्य गर्नेछैन । र राज्यले उचित कानून बनाई नागरिक तथा भावी सन्ततिको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको सुनिश्चितताको लागि अन्य कार्य गर्नेछ भन्ने जस्ता वातावरण सम्बन्धी हकलाई सविधानमा उल्लेख गरीनु पर्छ ।
साथै राज्यले वातावरण विनास तथा ह्ासका कारण हुने प्रदुषण तापक्रम वृि¢ जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय समस्याहरुको समाधान र क्षति न्युनीकरणको लागि विशेष व्यवस्था गर्नेछ । राज्यले प्रभावकारी वातावरण शिक्षा तथा जनचेतनात्मक कार्यक्रम लागु गर्नेछ भन्ने विषय राज्यको दायित्व निर्देशक िस¢ान्त तथा राज्य नितिमा उल्लेख गरिनु पर्छ भन्दै हामी सभासदहरुको घर घरमा गईरहेका छौं । हाम्रो यो सानो मिहेनतले संविधान निर्माणको एक छेउमा भए पनि केही सहयोग पुग्छ भन्ने आशा लिएका छौं ।
This entry was posted on March 29, 2009 at 4:11 am	and is filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “जलवायु परिवर्तनः संविधान सभा सभासद घरदैलो कार्यक्रम”
तपाईंको यो piece of writing पढ्दा रमाइलो लाग्यो किनभने तपाईं हामी सँग कुरा गरिरहनु भएको जस्तो अनुभव भयो ।
अलि critically भन्नु पर्दा यसले तपाईंको feeling लाई धेरै reflect गर्छ, analysis अलि धेरै भए राम्रो हुने थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
शुभकामना अरु यस्तै लेखहरुको श्रिंखला सुरु गर्नुहोस् ।।।